Inguqulo 0.5.0 – Isipele
March 24, 2010 by okunikezwayo 7 Amazwana
Namuhla baye bakhipha thina v0.5.0 okuyinto ushintsho kuqhathaniswa enkulu plugin njengoba inikeza izici ezimbili ezazincelisa eceliwe abaningi.
Owokuqala ukufakwa service yokusekelayo ngaphakathi plugin. Ungakhetha phakathi noma ngesandla usisekela, kumenyezelwa isipele kona wena nsuku zonke noma sivumele isipele kwenzeke bukhoma. Backup kuphela kwenziwa for izinguqulo human, futhi the mode live yokusekelayo, plugin umane athumele nguqulo enkonzweni yokusekelayo.
Le service yokusekelayo ugijima phezu google appengine ingqalasizinda, kanjalo ngempela yayo fast and scalable.
Owesibili sici isikhungo mass ukuhumusha, Manje kufakwe page izilungiselelo Transposh. Ungakwazi ishayise “Humusha All Manje” inkinobho futhi zonke page and post kuzohumushwa wena, kancane kodwa ngokuqinisekile. Qaphela ukuthi ukuhunyushwa kwenziwa ohlangothini amaklayenti, hhayi side server futhi nge latency ezanele ukuze akukho ukumesaba server yakho kabi isevisi yokuhumusha okuzenzakalelayo.
The releases elilandelayo towards the 0.6.0 version luzogxila kakhulu umsebenzisi (umhumushi) isipiliyoni kanye multi-lingual blog wrtiting integrations.
Imibono yakho owamukelwa njalo, nje ukuphawula lapha noma iya trac.transposh.org.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: service yokusekelayo, esilawula, ukukhululwa, Trac, plugin wordpress
Gcina “Trac” ezenzekayo zethu
December 11, 2009 by okunikezwayo Shiya amazwana
Indlela engcono Ukuthuthuka kusho ngosizo emphakathini, futhi sasifuna let everybody bazi ukuthi kwenzekani begodu yini indlela engcono ukugcina ithrekhi on esikwenzayo.
Uma umsebenzisi futhi bafuna athole ukwesekwa esheshayo bese waziswe mayelana izenzakalo ezintsha, ukhululeke silandele on Twitter.
Uma ufuna ukuhlanganyela emphakathini, bafuna ukusiza abanye futhi isifuba ngawe site lakho ngekusebentisa transposh, manje ikhasi kwi facebook.
Uma ufuna ukwazi ukuthi yini le Onjiniyela abakwenzayo, bazi nezici ezayo ngaphambi kokudedelwa bona ngokuvamile bathanda bephila engcupheni, landela trac yethu indawo Trac RSS.
Uma nje ufuna ukulandela izimemezelo ngapha site, uphawu RSS (noma ngezansi noma ekhelini browser yakho line) ungumngane wakho. Uzothola lokhu feed ngolimi Okwamanje usebenzisa.
Kwawo walamukela kakhulu njalo (bese uyazama thina ukuba uthole emuva ngokushesha ngangokunokwenzeka). Uma une nezinye iziphakamiso / imibono / zeluleko / behlakaniphile post izihloko – nje sazise.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: facebook, RSS, social, Trac, Twitter